Shiinaha Quail-ka Ibta Naasaha Cabbiyaha iyo Soo-saareha saxanka |Marshine
Weelka Cabbitaanka ibta digaagduur
3.With qaybaha hoose ee la saari karo ee nadiifinta fudud
Saxanka cabbida ibta digaagduur
Magaca alaabta Saxanka cabbida ibta digaagduur
Wax soo saarka PP, PE, PVC
Miisaanka alaabta 20g
midabka alaabta Casaan ama caddaan
Tirada alaabta 500pcs/bac
Cabbirka alaabta 4.2cm*6.5cm
Badeecadaha badeecada: Makiinada loogu talagalay digaagduur ama partridges.
Isku xidhka alaabta: Isku xidhka maroojiyay
1. Biyo nadiif ah—cabitaanka tooska ah ee digaaga ee cabbiyaha ibta naaska, Wax daataan iyo qooya, sida cabbista qaabka weelka asalka ah, si loo hubiyo in digaaggu uu heli karo nadiif, biyo nadiif ah, kaas oo ka fogaan kara cudurrada shimbiraha qaarkood.
2. Badbaadinta shaqada-ku xidh tuubada PVC ama weelka biyaha, uma baahnid inaad hubiso xaalada biyaha marar badan, kaliya waxaad u baahan tahay inaad hubiso in tuubada PVC ay ku xidhmaan biyaha ama weelka biyuhu ay biyo leeyihiin.
3.Easy for Chicken to use it-Naqshadaynta casaan/jaalle/liimi ah oo dhalaalaysa, soo jiidata shimbiraha ama digaaga iyo kuwa cabba ibta naaska ayaa siiya dhibco biyo ah mar kasta oo la jaro, waxay ka fogaan karaan cudurada shimbiraha qaarkood ee digaaga ciyaarta.
4.Si fudud loo nadiifiyo ibta naaska, sababtoo ah qaybaha la saari karo.
Hore: Koobka Biyo Quudinta Qoolleyda
Xiga: Giraanta cagta Shimbiraha digaaga
Koobabka Cabbitaannada Ibta Shimbirta digaaga
Cabbitaan Koob Digaag
Nooca koobka Digaagga Cabbitaannada
Koobabka Cabbitaannada Tooska ah ee Valve Waterer
Dhalada Biyaha Shimbiraha Tooska ah ee Xamaamka Xayawaanka...
Koobka Biyo Quudinta Qoolleyda
Ku dhufo nooca qoolleyda digaagga digaagduur si toos ah
Koob Biyaha Biyaha Cabitaanka Shimbiraha Caaga ah...
Bird Pigeon Quail oo Toomaatik ah Makiinada Biyaha Cabbista ...